Shaqada kala Go'an ee Maalintii Laba Jeer la Galo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shaqada kala Go'an ee Maalintii Laba Jeer la Galo
La daabacay tisdag 24 april 2012 kl 10.33
Shaqaale ka howl-galaya goob daryeel caafimaad.Sawirle: Bertil Ericson/Scanpix.
Dadyowga ku howl-gala shaqo laba jeer oo kala duwan la galo maalintii una dhaxeeyo xilli saacado ah ee mushaar la'aan ayey la soo gudboonaadaan dhibaatooyin ey ka mid yihiin in aaney nolol haboon la qaadan karin reerahooda. Middaa ayaa lagu ogaaday baaritaankii ugu horeeyay ee amuurtaa uu ka sameeyay machadka cilmi-baarista kadeedka ee jaamicadda Istockholm.
Habka shaqada kala go'an oo ey u dhaxeeyaan saacado mushaarad la'aan ah ayey ku howl-galaan shaqaale gaarsiisan 150 000 oo ruux iyadoona 40 000 ee ka mid ah, ama qiyaasii afar daloolow dalool caqabad ku qabaan hab-howleedkaa dhanka reerka iyo xilliga noloshooda fasaxa.
Shaqaalahaa waxaa ka mid ah Daniel oo ka howl-gala goob lagu xanaaneeyo dadyowga dhimirka beelay ee magaalada Västerås:
- Sida aan horeyba u iri, kolka aan shaqeeynayo maalmaha fasaxyada ee sabtida iyo axadda waxaan guriga ka tagaa caruurta oo hurudda, waxaana ku soo noqdaa iyaga oo hurda. Marka lama yeesho wax kulan ah.
- La kulan la'aanta caruurta miyaa ugu halisan kolka habkaa lagu shaqeeynayo iyo inaan reerka wakhti la isku helin?
- Haa, aniga haddaan iska hadlo middaa ayaa iigu dhib badan, ayuu yiri Daniel oo u warramayay laanta wararka ee ekot.
Qaar badan ee ka mid ah 150 000 ee ku howl-gala xilli shaqo ee kala go'aan iyadoona ey u dhaxeeyaan saacado mushaar la'aan ah maalin keliya ayaa ka howl-gala goobaha daryeelka iyadoona Anneli Nordström, hogaamiyaha ururka shaqaalaha ee degmooyinku u xaqiijisay ekot in middaasi dhibaato ku hayso qaar badan ee ka mid ah xubnaha shaqaalaha ee ururkeeda:
- Waa xaqiiq iney caqabad ku heeyso mar haddii ey dhibaateeynayso nolosha qooyska, xilliga fasaxa. Waa howl saacado dheer qaadata, iyadoona ey ku jiraan saacado dhexe ee aanu ruuxu howl hayn garanna karin wax uu qabto. Dad badani waxey deggen yihiin goobo shaqadooda ka fog oo aaney suurtagal u aheyn iney guryahooda ku laabtaan saacadaha fasaxa ey ku jiraan.
Cilmi-baarista noocani oo kale ah ayaan hore looga sameeyn mid guud ee dalka dhammaantii iyo sidii wax looga ogaan lahaa is-bedellada ku yimid.
Göran Kecklund, waa caalin ka howl-gala machadka kadeedka. Wuxuuna ka mid yahay culimmadii soo diyaarisey cilmi-baaristan:
- Inkasta oo aaney adkeeyn in la ogaado saacadaha la shaqeeyneyo ayaa haddana maalinta oo dhanay qaadataa iyadoona mushaarad lagu helayo oo keliya saacado aan ka badneyn 8,9 illaa iyo toban saacadood. Saacadaha u dhaxeeya labada gelin ee howsha ayaaney dadka badankii u istimaali karin hab wax ku ool ah.